WTTC Summit 2018 Buenos Aires: Was it worth it? | Argentina travel news
Ikhaya » izithuba » Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe » Iindaba zokuhamba eArgentina » Ingqungquthela yeWTTC 2018 eBuenos Aires: Ngaba yayixabisile?
Iindaba zokuhamba eArgentina • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zokuhamba ngeshishini • Imicimbi kaRhulumente • Iindaba zeShishini lokuhlangana • Iindaba zoKhenketho • Iindaba zeMibutho yoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziShukumayo
Ingqungquthela yeWTTC 2018 eBuenos Aires: Ngaba yayixabisile?
Ingqungquthela yonyaka ye-2018 yezoKhenketho kwiHlabathi liphela noKhenketho (WTTC) eye yaqukunjelwa eBuenos Aires, eArgentina, ngoLwesine, nge-Epreli 2018, 19.
Abo bathathwa njengomntu kwilizwe lokuhamba nokhenketho kwihlabathi liphela bangena kwiinqwelomoya kwaye bongeza amagama abo kuluhlu lokuthatha inxaxheba kwindibano yeentsuku ezi-2 kwiHilton Hotel eBuenos Aires, eArgentina. Baye bagoduka emva kwexesha elineentshukumo zeentlanganiso, bebonisa ubuso, bexela izinto ezintsha okanye bethatha inxaxheba eqongeni.
Ingqungquthela ye-WTTC ikwayindawo apho iinkokheli zeshishini labucala zidibana khona neenkokheli zikarhulumente kwaye ngokuqinisekileyo ziyahlangana phakathi kwazo. Yindawo apho abaphathiswa bezokhenketho kwaye ngamanye amaxesha neenkulumbuso zihamba nje ngesiqhelo sonyaka
Indawo yokubamba iindwendwe ihlala idunyiswa njengomzekelo oqaqambileyo wemisebenzi ejonge phambili kwezokhenketho. Inkqubo uqobo lwayo, nangona inqanaba eliphezulu kwaye linxibelelene neenkokheli ezimenyiweyo, ayisiyiyo eyona nto ibalulekileyo kulo msitho. Yintoni ebonakala ibaluleke ngakumbi yinto eyenzekayo ecaleni.
I-WTTC iyazi kwaye ibonelela ngeqonga elifanelekileyo lokuba oku kwenzeke. I-WTTC iyakwazi ukutsala i-CEO kunye nenqanaba labaphathiswa elithatha inxaxheba elenza ukuba eli qonga lisebenze.
Ewe, ingqungquthela yimali enkulu nayo. Ithetha umvuzo omkhulu kungekuphela nje kwi-WTTC kodwa nakwindawo ekubanjelwa kuyo ukuba kufuneka utyale amanani ama-6 okanye ngamanye amaxesha ngamanani ayi-7 ukuze kuzukiswe ukuba ngumgcini weWTTC.
Iindawo ekuyiwa kuzo zinethemba lokuba ukubamba kunye nokubhankisha kwinkomfa ekumgangatho ophezulu kuya kubaxhamla ngendlela enkulu kunye nexesha elide. Babelana ngeli themba nabo bonke abaphathiswa kunye neeCEO abazimasayo kwaye banethemba lokunyusa iindawo abaya kuzo kunye namanyathelo abo.
Kwiintsuku ezintathu emva komnyhadala ohamba "WTTC Summit 2018," Kwaye xa ujonga kwiGoogle News ubone amabali angaphantsi kwama-20 apapashwe kumajelo eendaba esiNgesi - phantse isiqingatha salo mabali eTurboNews.
Sinethemba lokuba ukuhanjiswa kweendaba kwimisitho emikhulu kuya kunyuka kulungelelanise ixabiso elifanelekileyo le-PR, kwaye kuthathelwe ingqalelo inani elikhulu leentatheli ezibanjiweyo kunye nokuzimasa.
Lo nyaka wawukhethekileyo kwi-WTTC. Kwakungunyaka wokuqala uNobhala-Jikelele we-UNWTO (Mnu. Zurab Pololikashvili) wabonisa ubuso bakhe iiyure ezimbalwa ngexesha lomsitho njengoko wayemi ecaleni kukaMongameli wase-Argentina kumsitho wokuvula kwaye wabhengeza inkxaso ye-UNWTO kwaye wathabatha ikhredithi kwiiprojekthi ezahlukeneyo.
Ikwangunyaka wokuqala we-WTTC CEO uGloria Guevara Manzo engamele ingqungquthela yeWTTC.
Umpapashi we-eTN uJuergen Steinmetz wayechulumancile ukubona uPololikashvili okokuqala kwinkomfa yoonondaba. UNobhala-Jikelele wayenentloni kwaye engafumaneki kwaye engaphenduli xa kufikwa ekuthetheni namajelo eendaba. Ukwazi oku, uSteinmetz wayeyintatheli yokuqala ebonisa ukuba unemibuzo ngeZurab.
Ngelishwa, uZurab kunye neCEO ye-WTTC uGloria Manzo abasamkelanga isicelo se-eTN sokubuza imibuzo ngexesha kuphela kwenkomfa yoonondaba eyayizimase uZurab. Emva kwenkomfa yoonondaba, uZurab uqhubeke nokungahoyi iinzame ze-eTN zokubuza umbuzo xa ebuzwa emva kwenxalenye esemthethweni yenkomfa yoonondaba.
Ke ngoko olu papasho luza kufuneka luqhubeke ukuxhomekeka kweminye imithombo xa kunikwa ingxelo ngemicimbi ekufutshane ne-UNWTO. Ukungafihlisi kunye nokungafihli nto kwi-Arhente ekhethekileyo ye-UN kuye kwaba ngumceli mngeni emva kokuba i-helm isukile kwaGqirha Taleb Rifai ukuya eZurab Pololikashvili. Umbuzo oxinzelelweyo ngulo: Yintoni ekufuneka iyifihlile i-UNWTO?
Kufuneka iqatshelwe i-Gloria Guevara Manzo kunye ne-WTTC ihlala iphendula kwaye ivulelekile kuwo nawuphi na umbuzo ngolu papasho.
Ingqungquthela elandelayo yonyaka ye-WTTC icwangciselwe i-2019 eSeville, eSpain. Lo iya kuba sesinye isiganeko sokunyibilika kweenkokheli eziphambili kushishino lwehlabathi kunye nezokhenketho.
Iya kuba lithuba lokuba iSeville, eSpain ibe ngumbuki zindwendwe olungileyo kwaye ibonise ukuzimasa abathunywa malunga nale ndawo yokuya eSpain.
Ngaba bekufanelekile ukuya kwiNgqungquthela ye-2018?
Umshicileli we-eTN uSteinmetz uqukumbele ngelithi: “Ngokuqinisekileyo ukuba ibonwa ngothungelwano. Malunga nokuzama ukuqonda indima ye-UNWTO yangoku kuhambo nokhenketho lwehlabathi, yazi ukuba uNobhala Jikelele omtsha uceba ukwenza ntoni, kwaye avavanye imisebenzi ye-UNWTO, uhambo oluya eBuenos Aires yayikukuchitha ixesha nemali. ”
Nalu uluhlu lwabantu kunye neziganeko ezithathe inxaxheba kwiNgqungquthela yeNgqungquthela ye-2018 eBuenos Aires.
HE Mauricio Macri, uMongameli weRiphabhliki yaseArgentina CEO, WTTC • Zurab Pololikashvili, Nobhala Jikelele, World Tourism Organisation (UNWTO)
Ilizwe lethu lanamhlanje, ilizwe lethu langomso
UGreg O'Hara, uMseki kunye neQabane eliPhetheyo, ii-Certities • UFritz Joussen, u-CEO, iqela le-TUI
Ubunkokeli kubudala bedijithali
Kwishishini elichazwe ngokwanda kokuphazamiseka kwedijithali le seshoni iya kujonga ukuba kuthatha ntoni ukuba yinkokeli efanelekileyo kwimozulu engaqinisekanga. Icandelo liza kujongana njani namathuba kunye nemiceli mngeni yeerobhothi kunye neArtificial Intelligence? Isizukulwana esilandelayo sabathengi nabasebenzi siza kuyakha njani le shishini? Luhlobo luni lobunkokeli oluya kufuneka kwixesha elizayo? ISIHLOKO: UPeter Fankhauser, u-CEO weQela likaThomas Cook I-PANELLISTS: • UDesiree Bollier, uSihlalo, iVenkile yokuThengiswa kweXabiso UMat Vella, uMhleli oLawulayo, IXESHA leMagazini
Ezotyelelo ezingama-300 njengeqabane lamanyathelo emozulu
Inkokheli yephulo lehlabathi lokutshintsha kwemozulu izakuphonononga unxibelelwano phakathi kwezokhenketho notshintsho lwemozulu, kunye nendima yezokhenketho ekuxhaseni inyathelo lehlabathi, kwaye inyathelo elitsha le-WTTC kuTshintsho lwemozulu liza kwaziswa. UPatricia Espinosa, uNobhala oLawulayo, iNgqungquthela yeNkqubo yeZizwe eziManyeneyo yoTshintsho lweMozulu (UNFCCC) • UChristopher J. Nassetta, uCEO, uHilton kunye noSihlalo, WTTC 1325 uGeoffrey Kent udliwanondlebe noGeoffrey JW Kent, uMseki, uSihlalo kunye ne-CEO uAbercrombie & Kent, uzobamba Udliwanondlebe lonyaka kunye nomntu owaziwayo kwaye ubalise amabali okuzonwabisa avela kwikhondo elibalaseleyo loKhenketho noKhenketho. • U-HRH u-Prince Sultan bin Salman, uSihlalo kunye noMongameli, i-Saudi Commission yezoKhenketho kunye neLifa leMveli leSizwe (i-SCTH) • UGeoffrey JW Kent, uMseki, u-Sihlalo kunye ne-CEO, i-Abercrombie kunye ne-Kent 1345 LUNCH 1515 yoKhenketho - injini yengqesho Emva kweNtlanganiso yezoKhenketho ye-G20 Abaphathiswa kusuku oludlulileyo, abaphathiswa bezokhenketho abavela kwi-G20 iphela banika isishwankathelo seziphumo eziphambili zentlanganiso, kwaye baqaqambisa indlela igalelo lezokhenketho kwi-ajenda ye-G20. U-HE Derek Hanekom, UMphathiswa wezoKhenketho, uMzantsi Afrika • U-Kazuo Yana, usekela-Mphathiswa wePalamente, uMphathiswa wezoMhlaba, iziBonelelo, ezoThutho noKhenketho, eJapan. U-Vinícius Lummertz, Umphathiswa Wezokhenketho, eBrazil
1540Uhambo olukhuselekileyo nolungenamthungo:
Ukuchaza umbono wexesha elizayo noKhenketho kunamandla amakhulu okudala imisebenzi kodwa kuphela xa abantu bekwazi ukuhamba ngokufanelekileyo nangokukhuselekileyo. Siqinisekisa njani ukuba umhlaba uhlala uvulekile ukuba ungahamba kwaye nohambo lwenziwa ngendlela ekhuselekileyo? Ngawaphi amathuba ajikeleze ibhayometri? Le ngxoxo izakujonga ukuba singazilungelelanisa njani iitekhnoloji, sivumelane kwaye siphumeze iinkqubo, kwaye sivavanye iindlela apho ishishini linokunxibelelana noorhulumente ukunceda ukuququzelelwa kohambo. ISIQINISEKISO: UGe Huayong, uSihlalo weBhodi, i-China UnionPay 1555 ICANDELO 1: uchonga itekhnoloji • UPaul Griffiths, u-CEO, kwisikhululo senqwelomoya e-Dubai • URichard Camman, VP Business Innovation, Vision-Box • Diana Robino, SVP, Travel Industries, Enterprise Partnerships, Mastercard Imodareyitha: Nick Ross, Summit Anchor 1625 ICANDELO 2: ukulungelelanisa iinkqubo kunye neNkqubo yokuQala, iQonga lezoQoqosho leHlabathi (i-WEF) • UPaul Steele, Ilungu eliSekela Mongameli eliLungu kunye noBudlelwane baNgaphandle, uNobhala weZiko, uMbutho weZizwe ngezothutho lomoya (IATA)
Imodareyitha: UArnie Weissmann, uMhleli kwiNtloko, ngeeVeki zokuHamba
ICANDELO 3: ukusebenza noorhulumente:
• U-Isabel Hill, uMlawuli, iOfisi yoKhenketho noShishino lwezoKhenketho, e-USA • U-Istvan Ujhelyi, Usihlalo weQela loMsebenzi wezoKhenketho, iPalamente yase Yuropu • U-Earl Anthony Wayne, Owayesakuba ngunozakuzaku wase Melika eModerator: Kathleen Matthews, Intatheli kunye no Msasazi 1715 BREAK 1745 ISIHLOKO UW.Donald, uMongameli kunye ne-CEO, iCarnival Corporation 1800 Ukulungela, ukomelela, ukubuyela kwimeko yesiqhelo Emveni kwentlekele, amazwe ahlala esesichengeni kakhulu. Siqinisekisa njani ukuba siyakuxhasa ukomelela kwexesha elide kwabo bajongene nezisongelo ezikhulayo zemothuko zangaphandle? Yintoni esinokuyenza njengeshishini ukulungiselela ngcono ngokuchasene nefuthe lothuselo olunje? Le seshoni iya kuphonononga iintlobo ezahlukeneyo zobunzima-ubhubhane lwempilo, ukhuseleko kunye nohlaselo lohlaselo, kunye neentlekele zendalo- kunye nezenzo ezithathiweyo ukuphucula ukulungela, ulawulo kunye nokomelela. 1800 ICANDELO 1: Ukucwangcisela nokulawula intlekele ISIQINISEKISO: • Peter Jan Graaff, UMlawuli kwiinkqubo zehlabathi
Inkqubo yezeMpilo kaxakeka ye-WHO.
I-PANELLISTS: • U-Najib Balala, uNobhala weKhabinethi yoKhenketho, eKenya • U-Sean Donohue, u-CEO, e-Dallas Fort Worth International Airport • UCathy Tull, i-CMO, i-Las Vegas Convention kunye ne-Moderator yeGunya leeNdwendwe: uKathleen Matthews, iNtatheli kunye noMsasazi we-1830 ICANDELO 2: Ukubuyisela kunye ukomelela • U-Edmund Bartlett, uMphathiswa wezoKhenketho, eJamaica • UMiguel Frasquilho, uSihlalo weBhodi, iqela le-TAP • UMark Hoplamazian, uMongameli kunye ne-CEO, iiHotatt Hotels • uHiromi Tagawa, uSihlalo weBhodi, uMongameli weJTB Corp: uNathan Lump, OyiNtloko, uKhenketho + loLonwabo
0815 - 0915 Ukhuseleko lwe-cyber:
Ngaba uphambi kwegophe? Le seshoni iza kuthatha imbono yesigqeba kwaye iphonononge uhlobo lobuchwephesha obutsha kunye nezoyikiso zokhuselo ezizisa kwicandelo lethu loKhenketho noKhenketho kwimeko yokuqinisekisa ukhuseleko ngokudibeneyo kunye nokomelela kweshishini lethu. • UNick Fishwick, uMcebisi, HSBC • URobin Ingle, uSihlalo kunye ne-CEO, Ingle International • U-Dee K. Waddell, uMphathi Jikelele, i-Global Travel & Transportation Industry, IBM • UAdam Weissenberg, iNkokeli yeHlabathi, ezoKhenketho, uKhenketho nezoBuka iindwendwe, iDeloitte neTouche
0930 Amazwi amava
Oomongameli bangaphambili kunye neenkulumbuso ezivela kwilizwe elithetha iSpanish bazakuxoxa ngemiceli mngeni kunye namathuba ophuhliso lokhenketho oluzinzileyo ngokuchasene nemeko yendawo eguqukayo yezopolitiko. • UJosé María Aznar, iNkulumbuso, eSpain, 1996-2004 • UFelipe Calderón Hinojosa, uMongameli waseMexico, 2006-2012 • Laura Chinchilla Miranda, Mongameli waseCosta Rica, 2010-2014 • UMarcos Peña, oyiNtloko yeKhabhinethi yabaPhathiswa baseArgentina UModareyitha weSizwe: UGloria Guevara Manzo, uMongameli kunye ne-CEO, iWTTC
1015 Amandla, ezopolitiko kunye nomgaqo-nkqubo
Kwilizwe apho ezopolitiko zihlala zintsokotha, kwaye apho imiyalezo yezopolitiko inokuba nefuthe ekukhuleni kwezokhenketho ngokuchanekileyo nangokubi, siva abadlali baseMelika malunga nendlela yokuhamba ngempumelelo kwimiceli mngeni. • UCaroline Beteta, uMongameli kunye ne-CEO, ndwendwela iCalifornia • URoger Dow, uMongameli kunye ne-CEO, US Travel Association urhwebo ngezilwanyana zasendle Ukunikezelwa kwenyathelo elitsha le-WTTC lokuxhasa inyathelo lehlabathi lokulwa urhwebo olungekho mthethweni kwizilwanyana zasendle. • UCatherine Arnold, iNtloko yeYunithi engekho mthethweni yokuThengiswa kweZilwanyana zasendle, iOfisi yamanye amazwe ne-Commonwealth, e-United Kingdom • UGary Chapman, uMongameli weQela leeNkonzo kunye ne-dnata, iQela le-Emirates • uGerald Lawless, uSihlalo wexesha elidlulileyo, iWTTC • UJohn E. Scanlon, uMthunywa oKhethekileyo, iiPaka zaseAfrika • UDarrell Wade, uMseki-mbumba kunye noSihlalo oLawulayo, iQela eliQhelekileyo . • UFiona Jeffery, uMseki kunye noSihlalo, iDrop kunye noSihlalo, uKhenketho lweeMbasa zaNgomso. • UJeffrey C. Rutledge, CEO, AIG Travel
1245 Ukukhula okuzinzileyo:
Ezokhenketho ezixhamlisa wonke umntu osebenza ne-WTTC noMcKinsey kunye neNkampani kwindlela yokulawula ukukhula kwezokhenketho ibonakalise ukubaluleka kokuzibandakanya koluntu kuhlumo oluzinzileyo lokhenketho. Bangadibana njani abo bachaphazelekayo ukuze bavumelane ngombono ekwabelwana ngawo malunga nendawo yabo? Singakususa njani ukugxila kude kumanani abakhenkethi kwaye siye kwindlela esemgangathweni eqhutywa ngakumbi, ejolise kwixabiso? UQHAGAMSHELWANO: Ukhenketho, uphuhliso noxolo-Ibali laseRwanda • IRt. Hon. Inkulumbuso yeRiphabhlikhi yaseRwanda, uGqr Edouard Ngirente 1300 Ixabiso vs ivolumu: Kukusebenzisa ukukhula ukuze wenze imveliso ekumgangatho ophezulu. UMlingane oPhezulu, uMcKinsey kunye neNkampani • U-Ana Mendes Godinho, uNobhala welizwe lezoKhenketho, ePortugal.
1330 Ukubeka uluntu kwi the iziko lophuhliso lokhenketho
U-Nikolina Angelkova, uMphathiswa wezoKhenketho, eBulgaria • UFred Dixon, uMongameli kunye ne-CEO, i-NYC kunye neNkampani • UKatie Fallon, iNtloko yezeMicimbi yezeNkampani, uHilton • uGonzalo Robredo, uMongameli weQumrhu lezoKhenketho leSixeko saseBuenos Aires. UTeo, uNobhala wezoKhenketho, uMongameli wePhilippines: UTim Willcox, uMsasazi, BBC News 1410 Hollywood, ukubuk 'iindwendwe kunye nohambo • Umlawuli ophumelele amaBhaso amaBhaso amaHlanu kunye nehotele, uFrancis Ford Coppola, ekwenziwe udliwanondlebe naye ngu-Costas Christ, u-CEO, Beyond Green Travel 1440 Amazwi okuvala • UGloria Guevara Manzo, uMongameli kunye neCEO, WTTC • HE José Gustavo Santos, uMphathiswa wezoKhenketho, kwiRiphabliki yaseArgentina 1450
Handover kwiNgqungquthela yeNgqungquthela elandelayo
ISevilla 2019 izakulandela!